Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu bọọlụ Norwegian Martin Odegaard Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi Martin Odegaard gwara gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu (Oda Burud), Ugbo ala, ndu ndi mmadu.
Ọ bụ ezigbo nkọwa nkọwa ịrị elu, ịda na nloghachi nke Martin Odegaard. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke akụkọ ndụ, ebe a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na ọganihu ọrụ ya.
Martin Odegaard Life Akụkọ.
Ee, onye ọ bụla maara nke ọma ikike ịgafe Martin Odegaard, usoro pụrụ iche na ịba mba.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Martin Odegaard Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido ebido, aha ya bụ El-Rey. A mụrụ Martin Ødegaard na 17th ụbọchị nke Disemba 1998 n'obodo Drammen na Norway. Amuru ya nne ya, Lene Cecile na nna ya, Hans Erik.
Zute nne na nna Martin Odegaard.
Martin Odegaard Ezinụlọ:
Nwa nwoke Lene Cecile na Hans Erik bụ onye bonafide nke Drammen yana nwa amaala Norway.
N'ezie, o nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ ya nke siri ike na mba North Europe ebe ọ bụ nwata kachasị nwee ọfụma kemgbe Ole Gunnar Solskjaer.
O bu onye omumu n’obodo ebe amuru ya.
Martin Odegaard Afọ Na-eto Eto:
You ma na El-Rey tolitere na Toppenhaug, obere akụkụ dị jụụ nke Drammen? N'ụzọ na-akpali mmasị, tupu Odegaard bilie, ndị mmadụ anaghị ejikọ obodo ahụ na bọl.
N'eziokwu, ọ bụ nanị ebe a ma ama maka fjords, ugwu, ọmarịcha ndagwurugwu ndị ụlọ osisi ndị mara mma, snow na-acha ọkụ, na ọkụ ndị Northern gbara.
Foto nwata bụ Martin Odegaard ya na nwanne ya nwoke nke okenye.
Yabụ, ụmụ amaala Drammen nwere Odegaard ikele maka itinye obodo ha na maapụ egwuregwu bọọlụ.
Ọ bụ n'obodo ahụ ka Odegaard malitere igwu egwuregwu ahụ ka ya na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Kristoffer na ụmụnne nwanyị abụọ ndị tọrọ, Emilie na Mari malitere.
Martin Odegaard Ezigbo Ezinụlọ:
Na mkpokọta, El-Rey nwere obi ụtọ Sporty na nwata na enweghị ihe dịka nwatakịrị. Ọ bụ ezie na ụmụ amaala nọ n'etiti, ndị nne na nna na nna nna Odegaard nọ na-azụ ahịa uwe.
Na mgbakwunye, nna ya banyere njikwa bọọlụ mgbe afọ nke ịbụ ọkachamara. Ya mere, ọ na-ekwughi na ego nzuzu n'egwuregwu ahụ nyeere ezinụlọ Odegaard aka ibi ndụ ntụsara ahụ.
Martin Odegaard Biography - Akụkọ nke Football:
Ka ọ na-erule oge El-Rey dị afọ 6, ọ bụrụla onye otu ọgbakọ ọgbakọ Drammen Strong.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ndị mụrụ ya na ndị ọzọ nyere klọb nnukwu ego iji mejupụta ala iberibe ala ha na turf.
Ọ banyela na football kemgbe ọ dị afọ isii.
Ulo oru a di nkpa maka mmepe Odegaard dika o nyeere ya aka imuta otutu oge na ubi.
N'ihi ya, Odegaard na-eto eto amaliteworị ịmalite nkà mgbe ọ sonyeere ndị ntorobịa nke Strømsgodset, otu ndị otu nna ya.
N'ezie, ọ kpaliri mmasị ndị nkụzi na ndị ọrụ ya n'ikike ya na ụkpụrụ ọrụ ya.
Starlet n'oge kachasị ọrụ ya na Strømsgodset,
Mgbe ndị na - agba ọsọ ọsọ na - agba ọsọ na - eme ngwa ngwa wee bụrụ onye izizi mbụ maka Strømsgodset, ndị na - amasị ya amachaghị ụdị àjà ọ na - achụ.
Iji malite, ọ ka nọ na-agụ akwụkwọ mmanye. Ya mere, ọ nweghị ohere iji ya klọb zụọ n'ehihie.
Kama, ọ zụrụ azụ na abalị mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-egwu egwu na-apụta mgbe niile na ọdụ ụgbọ elu Norwegian tupu ụbọchị ọmụmụ 16th.
Ọzọkwa, ọ gara n'ihu imere onwe ya aha dị ka onye mgbaru ọsọ na onye na-enyere ndị na-enyere aka aka maka klọb na mba.
Ọ (aka ekpe na foto abụọ) bụ akụ bara ụba nye ọgbakọ na mba.
N'ịbụ onye ọganihu nke nwa ya nwoke masịrị ya, Hans Erik chere na ọ gafeela oge nwa ya nwoke na-egwuri egwu na nnukwu egwuregwu.
Ya mere, o were Odegaard ka ya na ndi klọb di elu nke Europe tinyere Liverpool, Bayern Munich, na Arsenal zuo ike tupu ha edozi nke kariri ha nile - Real Madrid.
Martin Odegaard Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Dịka ilu na-aga, ọ bụrụ na ha ruru ogo, ha etoruola. Onye ntorobịa a dị afọ iri na ụma bụ Martin Odegaard emechabeghị ime ka ndị Spen nwee obi ụtọ.
N'ezie, ọ malitere ọzụzụ na Real Madrid superstars nke ndị otu egwuregwu mgbe ọ ka nọ na Los Blanco.
Mgbe kpakpando ahụ mechara bido maka Los Blancos na 'Ødegaard' n'azụ ka ndị 'Ronaldo' nọ na 2015.
Ọbụna o mere mmalite ya ka ọ bụrụ onye ga-anọchi ya Cristiano Ronaldo.
Agbanyeghị, ọfụma gbara ya gburugburu malitere ịda n'ihi enweghị ohere nke ndị otu egwuregwu n'okpuru Rafael Benitez onye na-elekọta ndị okenye setịpụrụ mgbe mgbasa nke Carlo Ancelotti.
Onweghi ohere nke ndi otu putara nwata Zidine Zidane kwalitere onye isi otu egwuregwu.
N'ihi ya, e nyere ya ego maka ụlọ ọrụ Dutch SC Heerenveen, bụ ebe o ji obi umeala na-egwuri egwu mgbe niile na-ewepụ anya.
Martin Odegaard Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
O yiri ka ọ na-agbagha na ihe nwere ike ịkọwapụta nke ọma dị ka ugbo mbinye ego, Odegaard zigara ya na Dutch Vitesse.
Ọ n'ụzọ dị egwu ghọrọ otu n'ime ndị egwuregwu Eredivisie nke oge site na ịtụle ihe mgbaru ọsọ itoolu na ịdenye enyemaka 12.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Los Blancos nwetara ihe karịrị ihe ha kwụrụ maka mgbe a gbazitere kpakpando ahụ na Real Sociedad na 2019.
O meriri nne na nna ya iji kụpụ ha na Copa del Rey na mmeri 4-3. N'ịbụ onye ihe mgbaru ọsọ ahụ juru, Fans nke Los Blancos enweghị ike inye aka inye nwata ahụ otuto.
N'oge a na-ede mpempe akwụkwọ a na akụkọ ndụ Martin Odegaard, midest maestro n'akụkụ Joshua King na Ọnye na -bụ Alexander Sørloth? bu ndi amara kpakpando na agba boolu ndi Norway.
Nke na-adọrọ mmasị karị, Martin abanyela na Arsenal na mgbazinye ego. Mikel Arteta maara banyere ndekọ egwu ya ma nwee okwukwe na ọ ga-agbanye ihe okike dị ezigbo mkpa nke etiti ụlọ ọgbakọ na-enweghị.
Kedu ụzọ ọ bụla ihe si gbasaa Odegaard na North London, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Hụ onye sonyeere ndị Gunners na nkwekọrịta mbinye ego.
Onye bu Martin Odegaard Enyi na Nwunye ka ibu:
Ọtụtụ ndị na-eto eto na-eto eto na-eto eto na-enwekarị ịhụnanya. Ọ bụghị ikpe Martin Odegaard onye nwere enyi nwanyi.
Aha ya bụ Oda Burud. Ọ bụ onye Norwegian na onye egwuregwu bọọlụ. Ha na-abụbu ndị mmekọ ịhụnanya tupu onye ọkpụkpọ ahụ akwaga Madrid.
Anyị enweghị ike ịsị na ọ bụ onye ọbịa n'ihe metụtara obi.
O yiri ka onye Midia na-ebute ụzọ tupu ya abanye Madrid, ebe ọ bụ na a nụbeghị ọtụtụ ihe banyere ya na Burud.
Otu anyị siri chee ya, ọ ga-abụ na ọ lụbeghị di. Ya na nwoke nwekwara ike ịna-akpa na nzuzo. Nke ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, bọọlụ kpọrọ ihe nzuzo asị ma ọ gaghị adị anya tupu ndị ọkaibe mara maka ya.
Martin Odegaard Ndụ Ezinụlọ:
Amamịghe egwuregwu amụrụ mana e mere ya. Ọ na-ewe ezinụlọ ime mmụọ dị ka El-Rey. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Martin Odegaard. Anyị ga-emekwa ka nkọwa nke ụmụnne ya na ndị ikwu ya dị Ebe a.
Banyere Martin Odegaard Nna:
Hans Erik bụ nna nke kpakpando. Dịka e kwuru na mbụ, ọ bụbu onye egwuregwu bọọlụ.
N'ezie, Erik na-egwuri egwu dị ka onye etiti etiti maka klọb ndị Norway, Strømsgodset na Sandefjord tupu ha kwụba akpụkpọ ụkwụ ya na 2006.
Nna Martin Odegaard, Erik.
Nna na-akwado ya abanyela ugbu a na njikwa bọl. Ọ na-eje ozi dị ka onye nnọchi anya Odegaard na njikwa na-akwadoghị ọrụ.
Na mgbakwunye, Erik na-ahụ na Odegaard gafere usoro ọchịchị na-agbanwe agbanwe ka ọ na-atụ anya ọrụ afọ iri n'ihu.
Banyere Martin Odegaard nne:
Lene Cecile bụ nne starlet. O nwere omume dị jụụ nke anyị kwenyere na Odegaard ketara.
Ka a sịkwa ihe mere o ji leghara Sergio Ramos anya mgbe onye nke a jiri iwe kpọọ mama ya aha ọjọọ n'oge nsogbu dị n'etiti Madrid na Sociedad.
Martin Odegaard na nne ya.
Mkparị mkparị nke Ramos bịara mgbe Odegaard jidere ya na ọkụ na njedebe nke oge, na-enweta onwe ya kaadị edo edo.
A sị na onye na-egwu egwu, mara ka mama Odegaard si hụ ya n'anya ma na-akwado ya, ọ garaghị asị 'M S *** na nne w ****.
Banyere Martin Odegaard ibmụnne:
Onye midfielder nwere nwanne nwoke tọrọ ya na ụmụnne nwanyị abụọ. Iji bido n’ nwanne ya nwoke, aha ya bụ Kristoffer. Ọ bụ onye nche nwere mmasị na ahụ ike.
Martin Odegaard ya na nwanne ya nwoke nke okenye Kristoffer.
Ka ọ dị ugbu a, enweghi obere ihe ndekọ banyere ụmụnne nwanyị Odegaard bụ Emilie na Mari bụ ndị họọrọ ibi ndụ nke onwe.
Anyị kwubiri na ha na-akwado kpakpando dịka nne na nna ya si akwado ya. Otú ọ dị, ụmụnne nwanyị ahụ kpebiri ịghara ịnyagharị na aha ya.
Martin Odegaard na nne na ụmụnne nwanyị.
Banyere ndị Martin Odegaard:
Apụghị n'ezinụlọ El-Rey, anyị chọrọ ịmata banyere nne na nna ya ochie. Anyị na-eche na o nwere ụmụnne nna na nwanne nne ya.
Kedu ndị ha bụ? Ọzọkwa, anyị ga-enwe mmasị izute ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya, na ụmụ nwanne ya.
Martin Odegaard Ndụ Nke Onwe:
You zutela onye ọ bụla bụ na-akpa ọchị ma na-adị mfe? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ ị nwere ike ịdị mfe ịkpa àgwà Odegaard. You bụ onye egwuregwu gamer? mgbe ahụ ị nwere enyi na Odegaard.
You hụrụ cheesi? Nye ya oku! Na mgbakwunye, ọ hụkwara ịgụ, ịme ụtọ ụtọ, ma na -emepụta oge iji soro ndị enyi na ndị ezinụlọ nọrọ. Ọ bụghị na ọ bụ onye na-egwu egwuregwu zuru ezu?
Anyị anaghị egwu egwu mgbe anyị kwuru na ọ hụrụ n'anya ịme smoothies.
Martin Odegaard Web site:
Na 2015, e nwere otu kpakpando na-eto eto nke ego ha na-enweta kwa izu bụ ihe na-erughị $ 45,000 dị ka New York Times. Nwere ike maa onye ọkpụkpọ egwuregwu ahụ?
Ee, Odegaard! Ngwa ngwa ngwa na 2021 ọ na-akpata ma nwee ọnụ ahịa 4.7m Euro ma ga-enweta £ 100,000 kwa izu. Wgwọ ahụ bụ okpukpu abụọ ya £ 38,000 na-akwụ na Real Madrid.
Maka izu oke anyị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya na anyị agaghị eche echiche banyere inwe oke ego dịka ụgwọ kwa izu. Anyị na-adụ ọdụ ka ịghara iche n'echiche ụgbọ ala iri abụọ na abụọ nwere ebe ndọba ụgbọala ya.
Tụkwasị na nke a, ọ ga-abara anyị ezigbo uru ma ọ bụrụ na anyị na-eme ka à ga-asị na ụlọ ma ọ bụ ụlọ Odegaard ka otu nde okpukpu ka mma karịa ebe obibi anyị bi.
Foto a na-ekwu okwu otu puku. Ọ bụghị ya?
Eziokwu Banyere Martin Odegaard:
Iji mechie akụkọ ndụ a na-akpali akpali, nke a bụ eziokwu ị nwere ike ịmaghị banyere ya.
Eziokwu # 1 - Martin Odegaard Salagwọ ọnwa na Ego nke Abụọ:
Kwa Afọ: £ 5,200,000.
Ọnwa kwa: £ 433,333.
Kwa Izu: £ 100,000.
Kwa :bọchị: £ 14,286.
Kwa elekere: £ 595.
Nkeji nkeji: £ 10.
Sekọnd: £ 0.16.
Kemgbe ị malitere ile Martin Odegaard Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - FIFA Ogo:
Na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike iji kpakpando na kpakpando tụlee, mana anyị enweghị ike inyere ya aka ugbu a. Odegaard nwere akara ngosi nke 83 isi na ikike nke 89 nke mere ka ọ dị nso na ụwa kacha mma.
Kemmasi! ọ bụghị ya?
Dị ka Erling Braut Haaland nwekwara (92 nwere ike ịbụ ọkwa maka 2021), akụkọ ọnụ ọgụgụ dị egwu nke Odegaard na-eme ka ọnụọgụ ọ bụla ị gụrụ ma nụ banyere ya.
Ọ bụ nnukwu ụlọ, akụ na ụba ndị Norway. Anyị na-atụ anya na ọ ga - enweta ikike a tupu ọrụ ya.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Martin Odegaard:
N'ihe banyere okwu nke okwukwe, Odegaard na-akọwapụta dị ka Onye Kraịst. N'ezie, Ọ tolitere n'ezinụlọ ndị Kraịst ma gwa ndị nta akụkọ otu oge na okwukwe okpukpe bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ ya.
Iji nweta nchịkọta Martin Odegaard's Bio, jiri okpokoro ebe a.
Aha zuru ezu: Martin Ødegaard.
aha otutu: El-Rey
Age: 22 afọ na ọnwa 10.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 17 nke December 1998.
Ebe amụrụ onye: Obodo Drammen na Norway.
Ndị nne na nna: Lene Cecile (nne) na Hans Erik (nna).
Ụmụnne: Kristoffer (nwanne nwoke nke okenye) Emilie na Mari (ụmụnne nwanyị ndị obere).
Ogo n'ogo: 5 ụkwụ, 10 sentimita asatọ.
Ogologo na cm: 178 UM.
Net uru: Euro 4.7m.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a banyere akụkọ ndụ nwata Martin Odegaard. Anyị na-atụ anya na akụkọ ndụ ndụ ndụ Midfielder na-akọwa njem ya site na mpaghara obodo Norway na Premier League emeela ka ị kwenye na amụrụghị onyinye kama emere ya.
Dị nnọọ ka nne na nna Martin Odegaard tinyere mgbalị na akụrụngwa na omume ya na mmepe ya niile. Ọ dị anyị mkpa n'oge a ịja ndị nne na nna Midfield mma maka nkwado ha na ọrụ bọọlụ ya n'okwu na omume.
Na Lifebogger, anyị na-anya isi n'inye akụkọ nwata na akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Martin Odegaard mụrụ na 1998
Zaa Clara 711
Ndewo Clara. Daalụ maka ịgbazi anyị na ụbọchị ọmụmụ nke Martin Odegaard. Anyị emeela nke ahụ.